April 2021 – Hlataw.com
.ဝေလွင်နှင့်ကလျာတို့သည်ညားခါစ . လင်မယားများဖြစ်သည်.. ထို့ကြောင့်နှစ်ဖက်မိဘများနှင့် အတူမနေချင်ကြပေ… ..ကြင်စဦးမို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝုန်းချင် သလို ကုတင်ကျိုးသွားအောင်အထိစောင့် ချင်ကြလေသည်…. ..ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးသားအလုပ်ပိတ်ရက်မှာ အိမ်ငှါးအရှာထွက်ကြလေသည်… …အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အကူအညီနှင့် လှလှဟုခေါ်သော်အပျိုကြီးအိမ်သို့သွားကြည့်ကြသည်.. အိမ်သည် နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင် ပျဉ်ခင်း အိမ်ဖြစ်သည်.. အိမ်အောက်ထပ်ဝင်သော တံခါးဘေးတွင်…
မမမိုး စိတ်လေနေပါသည်. ယောက်ျားကမလေးရှားမှာအလုပ်သွားလုပ်တာ၆လပဲရှိသေးသည်.. တနေ့တခါတောင်ဖုန်းမဆက်ဘူး.အလုပ်များလို့ဆိုပီး အကြောင်းပြနေသည်.. ဒီကြားထည်းကိုဗစ်ကပေါ်လာပြန် သည်..အိမ်မှာယောက်္ခမရယ်..ယောက်ျားရဲ့ညီရယ်.မမိုးရယ်သုံးယောက်ထည်းရှိသည်.. …..အသက်၅၀ယောက်ခမကစာအုပ်ဖတ်လိုက်အိပ်လိုက်နှင့်ဟုတ်နေသည်.. မတ်တော်မောင် ကလည်းဖုန်းပွတ်လိုက် အိပ်လိုက်နှင့်သာယာနေကြသည်.. ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဘယ်မှမထွက်ချင်ကြအိမ်တွင်းအောင်းကာလဖြစ်ပေသည်.. တိုက်ခန်းမှာနေကြသဖြင့်အခန်းသုံးခန်း မှာတယောက်တခန်းအောင်းရင်အချိန်ဖြုန်းနေရတာငြီးငွေ့စရာပေ… …….တနေ့တနေ့ဖေ့ဘွတ်နဲ့တင်အချိန်ကုန်လေသည်.. …”ဟဲ့.အောင်လေး..နင်အပြင်မသွားဘူးလား”. .အောင်လေးဆိုသည်မှာ ယောက်ျားရဲ့ညီဖြစ်သည်.. ..အဝေးသင်တက်နေပီးအလုပ်မရှိသေးပေ.. ..”မမိုးရယ်…
ကိုမြမောင်တယောက် မင်းကြီးဆမြူရယ်ကို “မြေနိုးအဖြူကောင် ယီးပဲကွာ..” ဟုဆဲဆိုမိ၍ ရန်ကုန်တာမွေဂတ်မှာ တာဝန်ကျနေရာမှ သာယာဝတီနယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရသည်။ ဖြစ်ပုံကဒီလို ကိုမြမောင် စနေ တနင်းဂွေ ဆိုရင် အလုပ်ပိတ်သဖြင့် တာမွေးဈေးအနီး ဖာဂေါင်းထွန်းကြည်အိမ်မှာ အချိန်ဖြုန်းတတ်သည်။ ဖာဂေါင်းထွန်းကြည်မှာ ကိုမြမောင်၏…
စပါယ်ရေညီမလေး” “ရှင်..မမ” “ဘာလုပ်နေလဲဟေ့” “စာကျက်နေတယ်.မမ” “အေးငါအဝတ်လျှော်နေလို့.ထမင်းအိုးလေးထကြည့်ပါဦး” “ဟုတ်ကဲ့မမ” သင်းသင်းနှင့်စပါယ်ဖြူတို့ညီအမ နှင့်အဖေကြီးတို့အိမ်မှာနေရတယ်၊ ငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘတွေမရှိကြလို့အဖိုးဖြစ်သူနှင့်လာနေတာလေ။ အခုသင်းသင်းအိမ်ထောက်ကျပြီ။ ဆယ်တန်းမအောင်လို့ညီမဖြစ်သူကို ဆယ်တန်းအောင်စေချင်လို့သာ စာကျက်ခိုင်းနေရတာ။ကျောင်းသာ ထားပေးရတယ်စီးပွားရေးကမပြည့်စုံဘူးလေ။ စပါယ်တောင်ဆယ့် ခြောက်နှစ်ဖြစ်ပြီ၊ကျမအသက်ကဆယ့်ရှစ်နှစ် ကျမကစပါယ်လောက်မလှပေမယ့်စပါယ်ထက်အသားဖြူတယ်။ ဒီအရွယ်ရောက်တော့ကျမမှာရည်းစားရှိတယ်။ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်ကကိုလူအေးလေးမောင်မောင်လေ။ရိုးသားလို့ကိုချစ်တာရှင့်။သူက လည်းလက်ထပ်မယ်ချည်းပြောနေတာ။သူလည်းအဒေါ်အိမ်မှာနေ…
စာရေးသူ ကငယ်ငယ်ကဝါသနာရှင်တယောက်ပေါ့.. အချောင်းကောင်း၍ ဖရီးစားရသောအခါများလည်းကြုံဖူးပါသည်.. ဒီဇာတ်လမ်းလေးက(၁၉၉၆)လောက်က .အတွေ့အကြုံလေးကိုအခြေခံပါသည်… ..ခုခေတ်ကတိုက်ခန်းတွေများ၍ချောင်းဖို့ကသိပ်မလွယ်တော့ပေ… ..လှိုင်သာယာမြို့သစ်စပေါ်ပီးနောက်မြို့သစ်အစွန်းပိုင်းများတွင်တနေ့လုပ်တနေ့စားများ စုပီးနေကြသောရပ်ကွက်တခုရှိသည်. .ပေ၂၀ကိုတအိမ်ဆောက်နေကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ.. အိမ်ရှင်အများစုက ဆယ်ပေတခြမ်းကိုထရံကာပြီးငှါးစားကြသည့်အချိန်..ပေါ့.. (မင်းမင်း…နယ်ကတက်လာပီး..ရန်ကုန်မှအသိတယောက်ဆီမှာတည်းခိုရင်းအလုပ်ရှာသည်.. လှိုင်သာယာကစက်ရုံတခုမှာအလုပ်ရ၍..အလုပ်နှင့်နီးသော ထိုရပ်ကွက်တွင်အိမ်ငှါးနေရန်ရှာရပါတော့သည်). .အကျင်းချုပ်ပြောရရင်တော့.. ဆယ်ပေခန်းလေးရတာပေါ့ဗျာ.. ခေါင်းရင်းခန်းအိမ်ငှါးက.. လင်မယား..ခလေးကမရှိကြသေး.. မင်းမင်းကခြေရင်းခန်းမှာနေသည်..…
ခင်လေးနှင့်ဇင်ဇင် အိမ်ပြန်ရောက်ပီးနောက်လွန်စွာပျော်ရွှင်နေကြသည်… ..ခင်လေးမှာ အမေဖြစ်သူကို သူရရှိခဲ့သောအောင်လက်မှတ်နှင့်ရိုက်ထားခဲ့သောပုံများပြသလေသည်.. ဒေါ်ခင်မမ..မျက်ရည်များကျရင်.သူမသမီးကို ဖက်လိုက်ကာ… “သမီးလေးတော်လိုက်တာ အမေမွေးရကြိုးနပ်တယ် ဟင့်”. . ထို့နောက် ခင်လေးရဲ့ဖုန်းမှ ပုံများကိုယူကြည့်ရာတွင်…. “ဟင်….”ဒေါ်ခင်မမ..လက်များပင်တုန်နေသည်… “အမေ ဘာဖစ်တာလဲ..”. . “ဒါ ဘယ်သူလဲသမီး”.…
နီလာရေ…နီလာ……. ဝေ့..နီလာ…အသံခပ်ကျယ်ကျယ်လေး..ကြားလိုက်ရမှ.. နီလာတျောက်…အတွေးနယ်ချဲ့နေရာမှ… အသိလေးဝင်လာခဲ့တော့သည်…….. ဟုတ်..ကိုကြီးစိုးမိုး…ဘာမှာမလို့လဲ… နင့်မလဲ…ဘာတေ.ငေးပီးဆွေးနေလဲ.. မသိတော့ပါဘူး..ခေါ်မကြား..အော်မကြားနဲ့….. ငါ.လဖက်သုတ်.တပွဲပေးဟာ. .ရေနွေးကြမ်းလေးပါပေးဦး..ဒီဟာတေက..အေးနေပီ… ဟဲ့ဟဲ့..ချဉ်ငံစပ်လေးနော်….သေချာလဲလုပ်ပေးဦး.. .တွေးရင်းငေးရင်းနဲ့..သုပ်လို့..ငါစားမရဖစ်နေပါဦးမယ်. ဟား…ဟား…ဟား… အာ…ကိုကြီးစိုးမိုး.. ကလဲ..အဲ့လိုလဲမဟုတ်ပါဘူး..၃မိနစ်စောင့်..ရှယ်သုပ်ပေးမယ်..ပုဇွန်ခြောက်လေးပါများများထည့်ပေးမယ်… အဲ့ဒါကြောင်းလဲ..နင့်ဆီပဲ..လာလာဆွဲနေရတာပေါ့ဟယ်…..ဟုတ်ပါတယ်….နီလာ..ဆိုတာ..ကျမလေ… အသားခပ်ညိုညိုနဲ့..အရပ်အမောင်း.. အလယ်အလတ်လောက်နဲ့..မြင်သူ…ပြန်လှည့်ကြည့်ရလောက်စေတဲ့. ဘောဒီ..နဲ့..ရင်သားခပ်မို့မို့နဲ့..တင်သားခပ်တင်းတင်းတေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျမ……ယောကျားရှိပေမဲ့….. ဗိုက်ခေါက်လေးနည်းနည်းထွက်နေတာကလွဲလို့.. .မြင်သူလိုးချင်စရာ….ဘောဒီ.…
(ဖြစ်ရပ်မှန် ကို အခြေခံပါသည်) သြော် ဘာလိုလိုနဲ့ ရွက်ဟောင်းကြွေလို ရွက်သစ်တောင်ဖူးနေပါပြီ နေညိုချိန်အိပ်တန်းတတ်လို့ဌက်လေးတွေတေးဆိုနေတာ ငါ့အတွက်အလွမ်းဆုတွေလား မတွေ့တာကြာလို့ နင့်ငါ့ကို သတိရရဲ့လားဟာ နင့်မရှိပဲ ငါ့ကျောင်းတတ်နေရတာ ငါ့မပျှော်ပါဘူး ခက်ခက် ရယ် နင့်နဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့ ၉တန်း…
လက်ဆင့် ကမ်း ရမ္မက်နွံ
ယမင်းထွန်းတစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ်နေသဖြင့် အနားယူချိန်ပင် မရှိပေ။ အဓိက အလုပ်ရှုပ်ရသည့် အကြောင်းမှာ ညီမ ဝမ်းကွဲ နွယ်နီ့အမျိုးသား၏ တူမဖြစ်သူ ခိုင်သုတ ရောက်နေခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ် မတက်ခင် သင်တန်းများ တက်ရန်အတွက် နွယ်နီ အကူအညီတောင်းထားသဖြင့်…
မိုးလင်း ကတည်းက အသဲအသန်ရွာသွန်းနေသော ကိုရွှေမိုးက ညနေရောက်မှာသာ လုံးလုံးတိတ်သွားတော့သည်၊ဇွဲကိုက ဆိုင်ရှေ့မှာပစ္စည်းလေးတွေ ပြန်ခင်းရင်းဈေးဝယ်သူအလာကိုသာ ထိုင်စောင့်နေမိတော့သည်၊မိန်းမက ဆိုင်အတွင်းက စက်ချုပ်ရင်း ညည်းသံသဲ့သဲ့ကို ကြားမိတော့ ပြုံးမိပြန်သည်။ ကျွန်တော်နာမည်က ဇွဲကိုပါ ၊အမျိုးသမီး နာမည်က မိုးမြင့်သူပါ၊ကျွန်တော်က စက်ရုံတစ်ရုံမှာ…